यसकारण घट्यो कुखुराको मासुको मूल्य – Rapti Khabar
काठमाडौँ – काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्दै गएपछि प्रशासनले त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागु गरेको निषेधाज्ञाका कारण ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य ओरोलो लागेको छ।
नेपाल ह्याचरी उद्योग संघका केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पोखरेलले सरकारले गरेको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण कुखुराको मासुको मूल्य ओरालो लागेको जानकारी दिए। लकडाउन र निषेधाज्ञाले कुखुरा पालक किसान मारमा परेको उनले बताए।
उनले भने, ‘यो व्यवसाय पनि तरकारीको जस्तै हो। लामो समयसम्म स्टोर गरेर राख्न मिल्दैन। अहिले मासु खपत हुने ठाउँ नै छैनन्। खपत हुने ठाउँहरुबाट मासु लिन आउँदैनन्।’
निषेधाज्ञाको समयमा आफूहरुलाई आवत–जावत गर्न असहज नभए पनि सर्वसाधारणका लागि भने समस्या भएको उनले बताए। जसका कारण किसानहरु मारमा परेका छन्।
किसानको लागत उठ्न पनि धौ–धौ भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘किसानहरु डुबे’ उनले भने, ‘सहज दिनमा दैनिक उपत्यकामा ४–५ लाख किलो मासु खपत हुन्थ्यो। तर अहिले एक डेढ लाख खपत हुन पनि हम्मे–हम्मे भएको छ।’
उनका अनुसार सामान्य दिनमा नेपालभर दैनिक ९–१० लाख किलो मासु खपत हुन्थ्यो।
यस्तै उनले कुखुराहरुलाई दाना–पानीको समस्या नभए पनि किसानहरुले दैनिक प्रतिकेजी ८० रुपैयाँका दरले नोक्सानी खेपिरहेको बताए। ‘दानाको समस्या छैन’, उनले भने, ‘तर किसानहरुले दैनिक एक केजीमा ८० रुपैयाँ नोक्सानी खेपिरहेका छन्।’
सरकारले महामारीको कहरलाई रोक्न करिब ५ महिना लकडाउन गर्‍यो। त्यो अवधिमा किसानहरुले आफ्ना उत्पादनहरुले बजार नपाएको भन्दै कुखुरा तथा चल्लाहरु नष्ट गरे। त्यसपछि कुखुराको अभाव भयो। लकडाउनको बिचमा आएर कुखुराको मासुको मूल्य झण्डै चार सय पुगेको थियो।
लामो लकडाउनलाई सरकारले बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै गर्दा व्यापार व्यवसाय, होटल तथा रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा आए। त्यसपछि मासुको खपत बढ्दै थियो। पुनः निषेधाज्ञा जारी ग¥यो, जसका कारणले सञ्चालनमा आएका व्यापार व्यवसाय तथा होटल रेष्टुरेन्ट पनि बन्द भएसँगै मासुको मूल्य घटेको राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघ अध्यक्ष जंगबहादुर बिसीले बताए।
मासु बढी खपत हुने ठाउँ भनेको होटल तथा रेष्टुरेन्टहरु हुन्। खपत हुने ठाउँ बन्द भएपछि स्वतः मूल्य घट्ने उनले बताए।
‘निषेधाज्ञाले सबै ठाउँ बन्द छन्। होटल तथा रेष्टुरेन्ट पनि। यी क्षेत्र नै बढी मासु खपत हुने ठाउँ हुन्। मासु पसलहरु पनि बिहान ९ बजेसम्म मात्र खोल्ने नियम छ। कसरी मासुको मूल्य बढ्छ’ उनले भने।
उपभोक्ताहरुमा बढी मासु खानेमा मजदुरहरु भए पनि रोजगारी गुमाएपछि उनीहरुले पनि मासु खान छाडेको उनको भनाई छ। ‘धेरै मासु खानेमा तल्लो तहका श्रमिकहरु पर्छन्’, उनले भने, ‘अहिले उनीहरुले रोजगारी गुमाएका कारण मासु खान छोडेका छन्। अहिले धेरै मानिसहरुमा आर्थिक अभाव सिर्जना भइरहेको छ।’
हाल कुखुराको मासुको मूल्य खुद्रा बजारमा प्रतिकेजी २४० रुपैयाँ रहेको उनले बताए। ‘तत्काल मासुको मूल्य बढ्दैन। जबसम्म स्टकमा रहेको कुखुरा सकिँदैन, तबसम्म मूल्य बढ्दैन। त्यसका लागि कम्तिमा एक महिना लाग्छ’ उनले भने।
कुखुरा व्यवसायी मारमा परे, अब के होला ?
उपत्यकाका तीन जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएसँगै बिक्रीमा आएको कमीका कारण कुखुराको मासुको मूल्य घटेको छ ।
गत चैतमा भएको लकडाउनका कारण घटेको कुखुराको मासुको मूल्य लकडाउन हटेसँगै बढेको थियो । तर भदौ ४ गतेदेखि लागू निषेधाज्ञाका कारण मासुको बिक्री ५० प्रतिशतले घटेको छ ।
पहिलो चरणको लकडाउन हटेसँगै कुखुराको मूल्य खुद्रा पसलमा ४३० रूपैयाँसम्म पुगेको थियो । तर अहिले एक केजीमै १८० रुपैयाँसम्म घटेर अहिले २५० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।
लकडाउनको समयमा बिक्रीमा ह्वात्तै कमी आएपछि करिब ७० प्रतिशत कुखुरा डम्पिङ गरिएको थियो । लकडाउन खुले लगत्तै बजारमा कुखुराको मासु अभाव भएसँगै भाउ निकै बढेको थियो ।
लकडाउनपछि साउन महिनामा प्रतिदिन उपत्यकामा मात्रै करिब ३ लाख केजी कुखुराको मासु खपत हुने भएको नेपाल ह्याचरी उद्योग महासंघका अध्यक्ष टिकाराम पोखरेलले जानकारी दिए ।
सरकारले निषेधाज्ञा लागू गरेपछि कुखुराको मासुको मूल्यमा गिरावट आई व्यवसायी मारमा परेको अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिए ।
‘हाल देशको ५० वटाभन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरेको छ । साथै, कुखुरा बेच्ने मासु पसलले दिनमा २÷३ घण्टा मात्र खोल्न पाएको छ,’ उनले क्लिकमान्डूसँग भने, ‘कतिपय जिल्लामा मासु बेच्नै नपाएपछि कुखुराको मूल्य घटेको हो ।’
विगतको दिनमा तीन सयभन्दा बढी मूल्यमा बेच्दै आएको व्यवसायीहरूले अहिले घाटा बेहोरेर प्रतिकेजी २२० देखि २५० सम्म बेचिरहेका छन् । उनका अनुसार उत्पादन धेरै तर बजारमा बेच्ने मानिस नभएपछि धेरै गिरावट आउने स्वाभाविक रहेको बताए ।
‘अहिले किसानलाई सबैभन्दा बढी नोक्सान भएको छ । हाल किसानहरुले प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ घाटा खाएर बेचिरहेको छ,’ उनले भने ।
भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावलका अनुसार कुखुराको मासु धेरै खपत हुने होटल, रेष्टुराँलगायत व्यवसाय बन्द छ । व्यापार व्यवसाय बन्द भएपछि बजारमा कुखुरा प्रशस्त उपलब्ध हुने भएकाले पनि बजारमा कुखुराको मूल्य घटेको उनको तर्क छ ।
‘घाटा कम गर्नका लागि किसानहरुले सस्तो मूल्यमा कुखुरा बिक्री गरिरहेका छन्, जसले गर्दा बजारमा कुखुराको मासुको मूल्यमा कमी आएको हो,’ उनले भने ।
त्यसैगरी, नयाँ बानेश्वरस्थित आइकालुका एक कर्मचारीका अनुसार कुखुराको मासु खपत ७० प्रतिशतले घटेको बताए । उनका अनुसार बिहान मात्र १÷२ घण्टा मात्र खोल्न पाएकाले कुखुराको मासु खपत कम भएको बताए ।
सामान्य अवस्थामा मुलुकभर दैनिक ८ देखि १० लाख केजीसम्म कुखुराको मासु खपत हुन्थ्यो । त्यसमध्ये ४ देखि ५ लाख केजी उपत्यकामा मात्रै खपत हुन्थ्यो । तर, अहिले उपत्यकामा करिब एक लाख ५० हजार मात्र खपत भइरहेको अध्यक्ष पोखरेलले बताए ।
भदौ २३, काठमाडौँ । अरुणाञ्चल प्रदेशको सीमानाबाट चिनियाँ सेनाले ५ जना भारतीयहरुको अपहरण गरेको भन्ने भारतको आरोपप्रति चीनले कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ । भारतका केन्द्रीय मन्त्री किरेन रिजिजुले भारतीय सेनाको सूचना फलो गर्दै अरुणाञ्चल प्रदेशको सीमानाबाट चिनियाँ सेनाले ५ जना भारतीय नागरिकको अपहरण गरेको विषयमा चिनियाँ सेनाको जवाफ पर्खिरहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिएका थिए […]
असोज ८, काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा कोरोनाबाट ६ जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौंमा तीन पुरुषसहित चारजना, भक्तपुरमा एक महिला र एक पुरुष गरी ६ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै उपत्यकामा ७५५ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार विभिन्न प्रयोगशालामा […]
Posted on August 6, 2019 Author Rapti Khabar